Talooyin iyo tabaha loogu talagalay sida aad ku heli iCloud ee kaabta faylasha
Ka iCloud soo ceshano Data .
".. Hi, sidaas darteed waxaan dhawaan helay iCloud iyo xoojiyaa aan iPhone waxaan ku arki kartaa in ay jiraan waa xog xoojiyaa laakiin ma heli karaan xogta ka aan pc ma suroobi karaa waddo si ay u helaan aan gurmad iCloud ka PC ah Waad ku mahadsan tahay?!" - Nancy
Sida Nancy, doonayaa in aan arko waxa aad iCloud? OK, waxaan qirayaa waa wax yar adag tahay in aan ka jawaabo su'aashaada in 2 ama 3 jumlado gaagaaban, sababtoo ah waxaa jira jawaabo dhowr ah. Oo iyaga qaarkood oo laga yaabo in mid ka mid ah oo aad doonaysaan ma noqon. Si kastaba, waxaa ii dhaanta inaan wadaagno dhammaan siyaabaha aad la, rajeynaya waxaan si buuxda uga jawaabi doonaa su'aalahaada:
Xalka 1: Access iCloud file aad kombuutarka by furitaanka iCloud goobta rasmiga ah (View QAYBTA xogta)
Xalka 2: Access iCloud gurmad file by celinta qalabka macruufka (doqon, LOL)
Xalka 3: Access iCloud gurmad file la Wondershare Dr.Fone ee macruufka (SIDA UGU WANAAGSAN)
Talooyin 1: Halkee waa iCloud gurmad file?
Talooyin 2: Sida loo Delete iCloud gurmad file
Sida kaliya ee Apple kuu ogolaanaya in aad si aad u hubiso waxa aad iCloud waxaa gashid iCloud goobta rasmiga ah . Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii aad gashid, waxaad ka heli doontaa in aad kaliya ku hubin kartaa qaybo ka mid ah xogta, ay ka mid yihiin: xiriirada, mail, jadwalka taariikhda, qoraalo, xusuusinta, Pages, Numbers iyo waraaqaha taabanaysa isu-diridda. Si kastaba, haddii aad u baahan tahay oo kaliya ay u fiiriyaan kor ku xusan xog ku iCloud, waa ku filan. Sida files iyo goobaha kale, sida sawirada, waraaqaha derbiga, cajallado fiidyow, barnaamijyadooda, fariimaha qoraalka ah, farriimo MMS, iMessage, ringtones, farriinta muuqaalka ah, iyo in ka badan, Apple ma ogola in aad si ay u helaan in iCloud. Haddii aad dooneysid inaad hesho files badan oo file iCloud, waa in aad baadhid xal 3 oo sheegayaa sida aad ku heli iCloud files gurmad, ka dib markii xogta aad u baahan tahay.
Tallaabada 1. Open iCloud goobta rasmiga ah ee la saarayo browser-ka on your computer;
Tallaabada 2. Log in aad iCloud account ama ID Apple oo loo hubiyo macluumaadka ku iCloud
Waan ogahay, waxaa codadka doqon si ay u helaan iCloud gurmad file by celinta qalabka macruufka. Si kastaba ha ahaatee, aad leedahay si aad u galiyo waa hab, sax?
Tallaabada 1. Tubada Settings> General> celi> masixi All Content iyo Settings.
Tallaabada 2. Sida ay su'aalo ka taagay, dooran Soo Celinta ka kaabta iCloud> Gal la account iCloud> dooran file ah oo gurmad ah si loo soo celiyo.
Muhiim: ka hor soo celinta qalabka macruufka la ah iCloud gurmad file, waa in aad gurmad xogta hadda ku macruufka aad sababtoo ah dhammaan xogta ku saabsan qalabka macruufka laga tirtirayaa iyo buuxsamay xogta jir file gurmad iCloud ah.
Xalka 3: Access iCloud gurmad file la Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (SIDA UGU WANAAGSAN)
Wixii ammaanka, Apple marnaba kuu sheegayaa halka aad iCloud gurmad file waa. Haddii aad u baahan tahay si ay u helaan iCloud files gurmad, inaad isku daydaa inaad ka qalab-saddexaad ama raadiyo jidka meesha iCloud gurmad file waa. Si kastaba ha ahaatee, in kastoo aad hesho iCloud files gurmad, guud ahaan, ma aad arki kartaa macluumaadka ee iCloud gurmad files ee faahfaahin ah. Waa xirmo oo dhan xogta wada qaso, soo bandhigeen sida code. Nasiib wanaag, Wondershare Dr.Fone doonista macruufka kuu ogolaanayaa inaad si ay u arkaan oo dhan iCloud files gurmad iyo xogta laga soo qaatay gurmad iCloud. Fiiri sida ay u shaqayso.
The World ayaa First macruufka Data Recovery Software aad u Access Data in iCloud ee kaabta faylasha
Download xogta ka iCloud gurmad file eegista;
Xogta Sort in iCloud gurmad file galay qaybaha;
Ogolaanayaa in dadka isticmaala si loo badbaadiyo macluumaadka ka iCloud gurmad file in computer
Si buuxda u la jaan qaada iPhone badan, iPad iyo iPod daydo taabto;
Tallaabada 1 Ku rakib Wondershare Dr.Fone ee macruufka on your computer
Download iyo rakibi Wondershare Dr.Fone ee macruufka on your computer. Haddii aad qabto Mac ah, isku day Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac). Haddii aad isticmaalayso PC Windows ah, rakibi Wondershare Dr.fone ee macruufka (Windows). Ka dib markii aad u soo dajiyo, waxaa isla markiiba abuurtaan.
Tallaabada 2 fariimaha qoraalka Scan ku iPhone
Guji Start Scan si ha Dr.Fone ee macruufka xogta scan aad iPhone. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, waxa aad ka arki kartaa dhammaan xogta, ay ka mid yihiin fariimaha qoraalka ah, waxaa lagu soo bandhigaa galeeysid bidix. Fadlan aad iPhone xiran your computer waqtiga oo dhan.
Tallaabada 3 Print fariimaha qoraalka ka iPhone
Scan ka dib, aad mid mid ku eegaan karo dhamaan fariimaha. Sax shayga aad rabto iyo badbaadin on your computer sida file HTML ah. Tani waxay noqon kartaa habka ugu fiican ee aad u hesho Qoraallada ka iPhone 5 ilaa PC daabacayo. Farriimaha qoraalka, ay ka mid yihiin fariimaha qoraalka ah tirtiray in aad iPhone la heli karaa oo laga daabacan baxay.
Talo 1: Halkee waa iCloud gurmad file?
Sorry inuu kuu sheego in Apple ma ku bixiyeen jidka meesha iCloud gurmad file waa la badbaadiyey. Sida xaqiiqada ah waa daruur, ee Apple ayaa server. Haddii aad rabto in aad hesho iCloud files gurmad, waa in aad codsato mid ka mid ah jidadka toosan kor ku xusan.
Talo 2: Sida loo Delete iCloud gurmad file
iCloud files gurmad qaadan meel aad u badan. Haddii aad isticmaali iCloud muddo dheer, markaas hubaal, waa in aad tirtirto qaar ka mid ah iCloud files gurmad jir ah, haddii kale waa inaad bixiso kaydinta dheeraad ah. Raac tallaabooyinka, waxaad tirtiri kartaa iCloud files gurmad jir ah oo ku saabsan mid ka mid ah qalab macruufka aad.
Tubada Settings> iCloud> Kaydinta & kaabta> dadban iCloud kaabta in ON> tuubada Maamul Kaydinta furmo isla. Tubada on file gurmad aad rabto in aad soo saarto ka iCloud> jaftaa Delete kaabta ah.
Sida loo sawiro ka iCloud wareejiyo Android
> Resource > iCloud > Sidee si ay u helaan iCloud File kaabta iyo sida aad u aragtid waxa ay ku iCloud